Faragalinta Qadar, Liraha oo kacey iyo Mareykankana oo diidey in cashuurta dib uga noqdo
Faragalinta Qadar, Liraha oo kacey iyo Mareykanka oo diidey in cashuraha dib uga noqdo
ANKARA - Turkiga ayaa waxaa uu diyaar u yahay in khilaafka jira kala hadlo dalka Mareykanka, hadii aysan jirin baqdin galin kale, sidaas waxaa yiri wasiirka arimaha dibada dalkaas Meviut Cavusoglu maalinimadii Arbacada xilli muranka labada dal u dhexeeya gaaray in qiimaha lacagta dalkaas afka ciida loo darey.
isagoo la hadlaya ambassadors ku sugan magaalada Ankara, Cavusoglu waxaa kale uu sheegey in xiriirka Turkiga la leeyahay dalalka Yurub uu yahay mid caadi ah kaaoso maalinba maalinta ka dambeysa sii xoogeysanaya.
Aqalka Cad ayaa cambaareeyey cashuuraha dalka Turkiga ku soo rogey badeecadaha uga yimaada dalka Mareykanka taasoo jawaab u aheyd talaabooyin maamulka Trump horey u qaadey.
Dalka Mareykanka ayaa labo jibaarey cashuuraha laga qaado biraha iyo Aluminum uga yimaada dalka Mareykanka, taasoo sababtey in qiimaha lacagta Liraha ee dalkaas hoos u dhaco.
"Lacagta Liraha ee hoos u dhacdey waan ka xunahay waana talaabo dhinaca khladan ah. Cashuuraha aan ku rogney dalka Turkiga waa kuwa danta dalkeena ku jirto. ee ma aha aargoosi aan ku sameyney dalka Turkiga." sidaas waxaa tiri gabadha u hadasha aqalka looga arimiyo dalkaas Sarah Sanders.
Khilaafka labadaan dal ee kawada tirsan ururka NATO ayaa sare u kacey kadib markii dowlada Turkiga xirtey nin dadka Kaniisada ah iyo diplomaasiyiin kale oo u dhashey dalka Mareykanka. Dalka Mareykanka ayaa sare u qaadey cashuuraha dalkaas falkaas kadib.
Dalka Qatar oo $15 Bilyan ku maalgalinaysa Turkiga
Madaxweynaha dalka Turkiga Tayyib Erdogan ayaa kula kulmay Amirka Qadar Sheikh Tamim bin Hamad al-thani magaalada Ankara.
Dalka Qadar ayaa lacagtaan uu ugu deeqdey dalka Turkiga waxaa u soo marineysaa Bangiyada iyo suuqayada lacagta isagoo ka caawinaya sidii kor loogu soo qaadi lahaa qiima dhaca ku yimid Liraha Turkiga kadib markii khilaaf xoogan soo kala dhexgaley labada wadan ee ka tirsan Nato.
Lacagta Turkiga ayaa dhumisay qiimaheeda 40% iyadoo ay jirto dhinaca kale faragalin Madaxweynaha dalkaas ku hayey in muddo ah dhaqaalaha dalkaas kadib markii uu dalbadey in hoos loo dhigo intrest-ka hay'adaha lacagta iyadoo sicir bararka dalkaas sareeyo.
Lacagta Liiraha ayaa qiimaheedu soo kabtey 6% maalinimadii Arbacada kadib markii Bangiga dhexe ee dalkaas faragalin uu sameeyey kadib markii uu hoos u dhigey cadadka lacagta taal suuqayada wadankaas.
Erdogan ayaa soo dhoweeyey tageerada dalka Qadar isagoo sheegey in talaabadaan sare u sii qaadeyso xiriirka labada dal, waxaana uu bartiisa Twitter ku xusey in dhaqalaha wadankiisu adag yahay kana soo kabanayo dhibaatooyinka jira.
Turkiga oo Ciidamo dheeraad ah u diray dalka Qadar
Caalamka 27.12.2017. 13:39
Dowladda Turkiga ayaa Ciidamo dheeraad ah u dirtay dalka Qadar oo go'doomin saaran...
Qaraxii Zoobe oo bedelay Taariikhda Soomaaliya [Warbixin]
Soomaliya 16.10.2017. 08:58